Ciidamada Kumaandooska Ayaa Sheegay in ay Burburiyeen Saldhig Alshaab ay Kulahaayeen Shabeelada Hoose – STAR FM SOMALIA
Saraakiisha ciidamada Kumaandooska Somaliya, ayaa sheegay hawlgal qorsheysan in lagu burburiyay Saldhig wayn oo Al Shabaab ay ku lahaayeen Gobolka Shabellaha hoose.
Hadalkaan ayaa waxaa sheegay Taliyaha Ciidamada Kumaandooska Somaliya G/Sare Ahmed Cabdullahi Sheikh, xilli uu la hadlaayay Warbaahinta dowladda.
Taliyaha Ciidamada Danab, ayaa wuxuu tilmaamay Saldhigyada ay burburiyeen ee Shabaab ay isticmaali jireen inuu ku yaallay deegaanka Leego ee Gobolka Shabellaha hoose, ciidamadana cagta ay mariyeen shalay oo Jimco aheyd kadib hawlgal qorsheysan oo ciidanka ay qaadeen.
Saldhigyada Leego ee Shabaab ay ku lahaayeen ayaa wuxuu sheegay in lacago gaadiidka looga qaadi jiray, sidoo kalena laga soo abaabuli jiray weerarada kala duwan ee lagu qaado xeryaha ciidamada.
Xoogaga Shabaab ayaa deegaanka Leego waxa ay qabsadeen Afartii Bishii August ee sanadkii 2017-ka, tan iyo xilligaana iyaga ayaa ku sugan oo maamula.
Ma jirto ilo ka madaxbanaan Saraakiisha ciidamada Danab oo xaqiijinaya in hawlgal qorsheysan lagu burburiyay Saldhigyadii Al Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Leego ee Gobolka Shabellaha hoose.
Shabaab dhankooda wax war ah kama aysan soo saarin hadalkaan ka soo yeeray Saraakiisha ugu sareysa Ciidamada Kumaandooska Danab.
Muddooyinkii u dambeeyay waxaa la kordhiyay hawlgalada kala duwan ee ciidamada Kumaandooska ay ka fuliyaan Gobolada dalka Somaliya.
Ciidamada ammaanka ayaa xalay waxa ay gacanta ku dhigeen nin tuug ah oo hub farsameysan dadka ku dhici jiray